မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နော်ဝေနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mrs. Hilde Solbakken အား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး လက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ (၂၀၂၀) ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၃) ရက်နေ့
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးသည် အောက်တိုဘာလ (၂၇) ရက်နေ့၊ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နော်ဝေနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mrs. Hilde Solbakken အား ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၄)၊ နေပြည်တော်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် နော်ဝေနိုင်ငံနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေမှုများနှင့် COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
သံအမတ်ကြီး H.E. Mrs. Hilde Solbakken က -
• မိမိအနေဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်းများကို အားထုတ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမှုများအား တွေ့မြင်ရပါကြောင်း၊
• နော်ဝေနိုင်ငံအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် Livelihoods and Food Security Fund: LIFT fund မှ တစ်ဆင့် ပံ့ပိုးမှုများဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး စစ်တွေပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် COVID-19 လူနာများထားရှိကုသမှုပေးရန် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မှုများ တွင်လည်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊
• နော်ဝေနိုင်ငံသည် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ စစ်တွေပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး အဆင့်မြှင့်တင်ရေး ရေရှည်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင်လည်းကောင်း ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊
• နော်ဝေနိုင်ငံအနေဖြင့်လည်း ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်နိုင်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ ကာကွယ်ဆေးထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် သာတူညီမျှဝေမျှပေးနိုင်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊
• စစ်တွေပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ ထပ်မံတည်ဆောက်နေရာတွင်လည်း ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊
• နော်ဝေနိုင်ငံတွင် ပြည်သူများက စည်းကမ်းလိုက်နာမှုများဖြင့် COVID-19 ကို ကာကွယ်ထိန်းချုပ် နိုင်လျက်ရှိပြီး တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အရေးကြီးသည့် စာသင်ကျောင်းများ ပုံမှန်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး အား အဓိကအလေးထားကာ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်နေပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
• နော်ဝေနိုင်ငံက LIFT fund နှင့် Access to Health Fund တို့မှ တစ်ဆင့် ပံ့ပိုးမှုများအပါအဝင် ဝန်ကြီးဌာနအား ပံ့ပိုးမှုများကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊
• နော်ဝေနိုင်ငံ၊ University of Oslo နှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်) တို့အကြား ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် Letter of Intent (LOI) လက်မှတ်ရေးထိုး ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများ၊ NORHED Project ဖြင့် University of Oslo၊ ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) (ရန်ကုန်)၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်)၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှ Mahidol University နှင့် Prince of Songla University တို့အကြား နော်ဝေနိုင်ငံ အထောက်အပံ့ဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများ၊
• MY-NORTH စီမံချက်ဖြင့် ပါရဂူဘွဲ့ပညာတော်သင်များ နော်ဝေနိုင်ငံသို့ စေဟလွှတ် သင်ကြားပေးခဲ့မှု၊ နော်ဝေနိုင်ငံ အထောက်အပံ့ဖြင့် Prince of Songla University တွင် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ Short Course Training Program များ စေလွှတ်ခဲ့မှု၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး တက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်) နှင့် ပူးပေါင်းကာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှုများ လုပ်ဆောင်နေမှုများနှင့် MY-NORTH Project (2020-2023) ဖြင့် ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှုများသည် ကောင်းမွန်ပါကြောင်း၊
• စစ်တွေပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး အဆင့်မြှင့်တင်ရေး ရေရှည်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျ ဆက်လက်ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊
• နော်ဝေနိုင်ငံတွင် ပြည်သူများက စည်းကမ်းလိုက်နာမှုများဖြင့် COVID-19 ကို ထိန်းချုပ် နိုင်လျက်ရှိသည်မှာ ကောင်းမွန်ပါကြောင်း၊
• မိမိတို့နိုင်ငံတွင် ရောဂါကူးစက်မှု ပထမလှိုင်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး ယခုလက်ရှိတွင် ရောဂါကူးစက်မှု ဒုတိယလှိုင်းဖြစ်ပွားလျက်ရှိပါကြောင်း၊
ဒုတိယလှိုင်းမည်မျှကြာမည်မှာ ပြည်သူများ၏ စည်းကမ်းလိုက်နာမှုအပေါ်၌ တိုက်ရိုက်မှုတည်နေပါကြောင်း၊ ဝိုင်းဝန်းညီညာစွာ စည်းကမ်းလိုက်နာမှု ရှိပါက မကြာခင်အချိန်အတွင်း ဒုတိလှိုင်းပြီးဆုံးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် လိုအပ်သည့် အမျိုးမျိုးသော စံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များကို ထုတ်ထားပြီး သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့၊ နှီးနွှယ်ဌာနများ၊ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းကာ COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊
• ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ မြန်မာနိုင်ငံ ရောဂါကူးစက်မှု ဒုတိယလှိုင်း COVID-19 ရောဂါပိုးအား မျိုးဗီဇစစ်ဆေးခဲ့ရာတွင် မိမိတို့၏ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှ ရောဂါပိုးမျိုးဗီဇနှင့် တူညီသည်ကို တွေ့ရှိရပြီး၊ ယခင်ရောဂါပိုးမျိုးဗီဇနှင့် မတူညီဘဲ မျိုးဗီဇပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရကာ ရောဂါလျင်မြန်စွာကူးစက်ပြန့်ပွား နိုင်သည်ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊
• မိမိတို့နိုင်ငံတွင်လည်း ပြည်သူများ၏ စည်းကမ်းလိုက်နာပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုအားကောင်းစေရေး အပါအဝင် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများကို အားဖြည့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊
• ယခုအချိန်တွင် COVID-19 ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုများပြားနေသဖြင့် စာသင်ကျောင်းများ ခေတ္တပိတ်ထားရပြီး ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုများ ထိန်းချုပ်လာနိုင်ချိန်တွင် ရောဂါကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းများချမှတ်၍ အဆင့်ဆင့် ကြီးကြပ်ကာ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊
• နော်ဝေနိုင်ငံ၏ ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်မှုများကို ကျေးဇူးတင်ရှိပြီး ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ကျန်းမာရေးလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာတင်တင်လေး၊ ပြည်တွင်းပြည်ပဆက်ဆံရေးနှင့် သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာအောင်စိုးထက်၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နော်ဝေနိုင်ငံသံမှူးကြီး Mrs. Lise Nordgaard နှင့် တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
Author: MOHS-Admin Last modified on Tuesday, 03 Nov 2020